Bentley na-ebupụta Onyinye Ọha nke Mbụ (IPO) - Geofumadas
Nọvemba, 2020 Geospatial - GIS, Engineering, Microstation-Bentley
Bentley Systems kwupụtara mwepụta nke onyinye ihu ọha mbụ nke 10,750,000 mbak nke klas ya na klas B. A ga-erere klas ndị a na-enye na klas B nke ndị nwe Bentley dị ugbu a. Ndị na-ere ahịa na-atụ anya inye ndị na-ede akwụkwọ na onyinye ụbọchị 30 iji zụta ihe ruru 1.610.991 ọzọ nke klaasị B nke ngwaahịa ndị ahịa. Ọnụ ego a na-enye n'ihu ọha bụ nke dị n'etiti $ 17,00 na $ 19,00 kwa otu. Bentley etinyela aka depụta mbak ya na NASDAQ Global Select Market n'okpuru akara "BSY."
Goldman Sachs & Co. LLC na BofA Securities na-eme dị ka ndị isi njikwa akwụkwọ na RBC Capital Markets na-eme dị ka onye njikwa akwụkwọ maka onyinye a chọrọ. Baird, KeyBanc Capital Markets na Mizuho Securities na-eje ozi dị ka ndị njikwa na-enye onyinye. Oke ụlọ ọrụ ahụ bilitere 52% na ụbọchị mbụ ọ na-azụ ahịa. Ekepụtara meghere na $ 28 na Wednesde wee mechie elu $ 33,49 na ahịa Nasdaq.
Greg Bentley, Onye isi ala, Onye isi ala na Onye isi ala kwuru na, n'aha ụlọ ọrụ ahụ, ọ na-enwe obi ụtọ na ọ rụpụtara ihe a dị mkpa. Ọ gbakwụnyere na ha nwere olile anya na IPO ga-adọta uche nke ndị injinia obodo na nke nhazi nke na-ewu mmiri mkpofu ụwa, ọdụ ụgbọ elu, okporo ụzọ na usoro ikuku.
Mkpa maka Geoengineering?
Bentley guzosiri ike dị ka otu n'ime ndị isi na teknụzụ ihe owuwu, na-akụ nzọ na ijikọ teknụzụ njikwa data na ọrụ injinia na akụ. Ihe butere inweta usoro ịgba ume na ịrụ ọrụ nke ọma ebe a na-amata ụdị mmetụta dị iche iche n'oge. Mkpebi a ị ga-aga n'ihu ọha abụghị ihe ọhụrụ, ebe ọ bụ na ha mebere ọrụ ndị a site na nkwekọrịta nkeonwe, agbanyeghị, mgbe ihe dịka afọ 36 meghere onyinye a kpamkpam n'ihu ọha Nasdaq Global Họrọ Market.
Ruo afọ 36 anyị ejirila sọftụwia anyị jeere ndị injinia ozi, jiri obi ike kwenyere na ịrụ ọrụ ka mma yana akụrụngwa ndị ọzọ dị mkpa iji meziwanye ndụ nke ndị mmadụ ebe niile, na-akwado gburugburu ebe obibi anyị na akụnụba anyị. Greg Bentley, onye isi oche nke Bentley Systems.
Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere ịghara ịjụ onwe anyị, sị: Gịnị bụ mkpa nke a nzọụkwụ na ụwa nke Geoengineering? N'otu ụzọ, ọ ga-agbanwe etu esi azụ ahịa ngwaahịa na nhazi ihe omume metụtara ya, mana ọ bụghị maka mma, kama ọ ka mma. Na-akwalite okike nke ihe ngwọta metụtara akụrụngwa akụrụngwa (ma na ọrụ ọha, ụlọ, atụmatụ obodo ma ọ bụ njikwa mmiri), na-abawanye ike na ndụ nke ozi, iwu na ịrụ ọrụ nke ihe, nke dị ukwuu site na ijikọ na BIM na DT (Digital Twins, Digital Twins).
Ebumnuche nke onye ọkachamara Geoengineering bụ ịbanye n'ụwa ọhụrụ a, nke meworo ụzọ ya na-eme ihe ike, na-eji teknụzụ na-eme ka imepụta, ịme ihe, nyocha, nchekwa, iwu na nlekota nke data dị mfe. Teknụzụ nke ọ bụla dị na AEC yinye (Architecture, Engineering, Construction) chọrọ nchikota zuru oke, DT na BIM nwere ike ịbụ ụzọ bụ isi maka njikwa akụrụngwa, mana ekwesighi ileghara mpaghara ohere. Nchikota BIM + DT + GIS siri ezigbo ike, ọ bụkwa ihe ndabere ga-adịgide ebe niile na ngbanwe ụlọ ọrụ nke 4 a.
E si na Twingeo Magazine 5th mbipụta
Previous Post«Previous TwinGEO Agba nke ise - Echiche Geospatial
Next Post Nna-ukwu na Geometries Iwu.Next »